Maxaa ka haray dhammaystirka Road Map-ka? | Somali - Diaspora
Maxaa ka haray dhammaystirka Road Map-ka?
Dhammaystirka khariidadda waddada (The Road map)– aya wali ka dhiman qodoba ay kamid yihiin samaynta aqal sare oo odayaashu leeyihiin; fududaynta dhisidda maamul goboleedyo ka mid noqon doona dowladda federaalka– waa su’aal ku taagan maskaxda Soomaalida iyo beesha caalamiga. Dastuurka qabyo-qoraalka ah ayaa farayo madaxweynaha dhammaystirka heshiisyadii saxiixayaashu saxiixeen intuusan noqon madaxweyne.
Kaalinta Beesha Caalamiga
Beesha caalamiga oo isu jirta dalalka Afrika oo ciidamadu ka joogaan Soomaaliya, Midowga Yurub iyo Maraykanka waxay doonayaan in geeddi- socodka yagleelidda hab federaal ah la gabagabeeyo si dadaalkoodii iyo xoolihii kaga baxay Soomaliya u noqonin hal bacaad lagu lisay.
Qaraarkii tirsigiisu ahaa 2067, oo uu Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay soo saaray 18kii Sebteembar, wuxuu farayaa madaxda Soomaalida inay hirgelayaan qodobadii dib loo dhigay ee khariidadda waddada ( The Road map). Sidoo kale wuxuu qaraarku ku boorrinayaa madaxda cusub inay hirgeliyaan cadaaladda kala guurka ( transitional justice ) oo qaybaheedu ka mid yihiin, maxkamadaynta dadka ku xadgudbay xuquuqda aadamiga (prosecution), samaynta goleyaal runta helisteeda u guntada ( truth commissions ) , barnaamijyo magdhaw ( reparations programmes) ah iyo habaynta hey’adaha dowladda.
Dhibta ugu weyn oo soo food-saarta madaxweyne Soomaliyeed waa jiritaanka maamullo hirgalay iskoodna u muujiyay inay ismaamuli karaan dowlad dhexe la’aan. Sida uu ku taliyay bare-sare Ken Menkhaus, kaalinta dowladda Soomaaliyeed waa inay noqoto mid wax fududeysa ( facilitative).
Maamulka Puntland wuxuu tageeray dowladdii ra’iisal wasaare Saacid soo dhisay oo wuxuu xusuusiyay ra’iisal wasaaraha xilka ka saaran dhammaystirka wixii lagu heshiiyay. Si kastaba ha ahaatee. Madaxweyne Xasan Shiikh waxa uu qabaa in laga maarmay kaalintii saxiixayaasha waayo Soomaaliya hadda waxay leedahay dowlad iyo barlamaan aan ku meel gaar ahayn.
Waa suurto-gal in aragtidiisani noqoto mid curyaamisa siyaasaddiisa oo si deg deg ah u muujisa inuusan siyaasadda u faro-dhuudhuubnayn la colloobista saxiixayaasha iyo beesha caalamiga awgeed. Ilaa hadda madaxweynuhu muu soo hadal-qaadin khariidadda waddada (The Road map). Waxay u eg tahay inay siyaasadda ka meermeerka la shaqaynta saxiixayaasha dabri doonto madaxweynaha iyo kooxda la talisa ee Damul-jadiid.
Dareenkii Madaxweynenimada Ka Hor
Markii uu socday shirkii London oo loo abaabulay Soomaalida bishii Febraayo ee sanadkan, madaxweyne Xasan Shiikh, oo berigaas ka mid ahaa bulshada rayidka, ayaa mar uu ka qeyb qadanay dood ku saabsaneyd shirkii London iyo Saxiixayaashii ka qeybgalayey oo ay qabatay Talefishinka laga leeyashay dalka Qatar ee Al Jaziira ayaa duray kaalinta saxiixayaasha.
Madaxweynaha ayaa qaba in saxiixayaashu yihiin dad an la soo dooran oo Soomaalida aan cod ka haysanin taasna waxaa la qaba dad aan yareyn oo Soomaali ah.
Xiriirka Madaxweynaha iyo Saxiixayaasha Road Map ka
Ilaa hadda madaxweyne Xasan Shiikh xiriir toos ah lama samaynin saxiixayaasha kaalinta ku lahaa dhammaynta dowladdii-ku-meel gaarka ahayd. Qodobbada qaraarka waxa adeegsan kara maamullada kuna eedeeya in madaxweynuhu isku koobay koox lagana waayay iskaashi heer qaran.
Dadka Siyaasada odorasa ayaa waxa ay leeyihiin isqabqabsi ka dhexbilowda Madaxweyne Xasan iyo Saxiixayaasha Road Map ka ay dhici karto in uu bilowdo goor aan fogeyn.
Suaasha meesha ku jirtaa ayaa ah Madaxweyne Xassan SH Maxamuud Sidee buu u fulin doonaa qeybaha ka dhiman Road Map ka Maxaase uga imaan kara ku dhegganaanta fikrado uu aaminsanaa mar uu ahaa qof aan xil qaran haynin?
Waa kan Link la xiriira qaraarkii Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay
Resolution 2067 (2012)
Adopted by the Security Council at its 6837th meeting, on
Markuu Qaran is-ilowsiiyo !! Daawo Sawirro: Madaxweyne Xassan oo Siweyn Loogu Soo Dhaweeyey Dalka Itoobiya